डा‍. केसीका माग सम्बोधन गर्न वालुवाटारमा छलफल जारी, आजै सहमति गर्ने तयारी - Everest Dainik - News from Nepal
डा‍. केसीका माग सम्बोधन गर्न वालुवाटारमा छलफल जारी, आजै सहमति गर्ने तयारी
काठमाडौं, साउन ९ । २६ दिनदेखि आमरणरत प्राडा गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय छलफल शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाबीच छलफल भइरहेको भइरहेको बताइएको छ ।
यसअघि संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आएका डा केसीले मंगलबार २५ बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने बताएपछि ती बुँदाहरुमा अहिले बालुवाटारमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेपालको विदेश नीति चीन र भारतबाट शुरु हुन्छ : प्रधानमन्त्री
सरकारी वार्ता टोली र डा केसी पक्षबीच मंगलबार लामो वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा केसी पक्षले २५ बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने लिखित प्रस्ताव गरेका थियो । डा केसी पक्षका वार्ता समितिका संयोजक डा अभिषेक सिंहले आफ्नो तर्फबाट सबै आन्तरिक तयारी पूरा रहेको बताए ।
यसअघि बिहान ९ बजे दुईपक्षबीच वार्ता हुने भनिएपनि डा केसीका माग सम्बोधन एवं विद्येयकमा भएका बुँदाको संशोधनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गरेपछि बालुवाटारमा छलफल शुरु भएको हो ।
बालुवाटारको छलफलपछि सरकारी वार्ता टोली र डा केसी पक्षबीच बुधबार नै वार्ता हुने र सम्भव भएसम्म आजै सहमति गर्ने सरकारी तयारी रहेको जनाइएको छ । सरकारी वार्ता टोलीलाई विधेयकमा केन्द्रित छलफलका लागि मात्रै अधिकार दिइएको छ । डा केसीका माग पूरा गर्न राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले दुबै अध्यक्ष र माथेमाबीच छलफल भएको गरिएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा र क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डा केसीको यो १५ औं आमरण अनशन हो । र अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो पनि । डा केसीको बढ्दो उमेर स्वास्थ्य परीक्षणसहित औषधि लिन नमानेकाले स्वास्थ्य निकै कमजोर बनेको छ ।
ट्याग्स: baluwatar, dr kc